My sister mwana wabamkuru has a child with my father - Zim247
Yangu haisi confession bt i need help guys i am in pain , thanks in advance kune vachabatsira.
Nyaya yangu yakamira yakadai so ndiri mukomana ane 23 years and i am the first born in a family of 4,baba vangu vanoshandira kuDubai vanouya after every 6 months for leave, kuno ku Zim i stay with mom and siblings.
In june mdara was supposed kuuya ku leave bt due to Covid vakatadza kuuya so he had bought me a phone vachiti vachauya vachindipa bt vakazosvika pakutadza kuuya nenhau ye covid.So extended his stay up to December bt since he had bought me a phone he looked for someone who was coming to Zimbabwe ndiye akabva apihwa that phone sometime in August kuti auya achindipa kuno ku Zimbabwe.
All went well according to the plan , phone yakasvika and ndakafara bt mdara had slightly used the phone from June and July problem started nda installer whatsapp guys , I discovered shock of my life that my sister mwana wabamkuru has a child with my father ,that sister of mine has been married and from his marriage akaita vana 2 ndokusiwa nemurume so akazongogara ega nevana kusvika azoita imwe nhumbu which no one ever questioned who was responsible for that pregnancy since ati kurei, so the child is nearly 2 years now.
So i am the only one who knows this thing in my family and I don’t know what to do with this situation hama , ndagumirwa kusvika pekupedzisira chaipo cz i know if i tell my mom and my siblings this will lead to unpredictable chain of events.
Hama dzangu i am living a miserable life, happiness is now luxury for me, i have lost weight cz zviri kundikunda ini , my world is torn apart , kuti ndifunge kuudza amai vangu nyaya yakadai ndinotovatyira kuti ndinovauraya ne bp cz what i am going through maybe more to what she will be going through vakaziva nyaya iyi, ndokumbirawo rubatsiro kune vachabatsira cz ndiri ndega mutoro wacho wandirema.